Orapwa gomarara kuna’nga | Kwayedza
17 Jan, 2020 - 00:01	 2020-01-16T20:04:53+00:00 2020-01-17T00:00:44+00:00 0 Views
Tichaona Blessed Nanthiya
MURUME wekuMacheke, kudunhu reMashonaland East, uyo anorarama nehusope ari kutsvaga rubatsiro kubva kune veruzhinji rwekuti arapwe gomarara riri padama rake iro riri kumutambudza.
Tichaona Blessed Nanthiya (35) — uyo akawanikwa neKwayedza achishandirwa kuimwe n’anga yekuChitungwiza — anoti gomarara iri rakatanga kumushungurudza mumwedzi waChivabvu gore rapera.
“Ndakatanga kutambudzwa negomarara mumwedzi waChivabvu gore rapera uye ndinogara kuMacheke kuAthlone Farm kune Nhohwe High School. Ndiri kuchema kuti kana pane vanokwanisa kundibatsira kuti ndirapwe vandibatewo panhamba dzinoti 0772 287 692.
“Ndakamboenda kuzvipatara zvakawanda kuti ndibatsirwe asi zvakaramba, ndiko kusaka ndakaona zviri nani kuti ndimbobatsirwa nemishonga yechibhoyi,” anodaro achiratidza kurwadziwa.
Ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Cancer Association inoratidza kuti vanhu vanorarama nehusope vane mikana yakawanda yekutambudzwa nezvirwere zvegomarara, zvikuru reganda sezvo miviri yavo ichikasika kukuvadzwa nezuva. Dambudziko rekudhura kwemishonga uye mafuta anotanda zuva (sunscreen lotion) ndiro rimwe riri kuita kuti vanhu vane husope vapedzisire vabatwa negomarara yeganda. Veruzhinji vanokurudzirwa kuti vavhenekwe gomarara nenguva kuti vakurumidze kurapwa chirwere chisati chakomba.
Kambani yeZimpapers ndiyo imwe iri kubatsira varwere vegomarara apo inounganidza mari yainozoendesa kusangano reIsland Hospice kunobatsira varwere vegomarara, zvikuru avo vari panhowo.